Nhasi kunotanga kunetsekana kweMwedzi weMoyo | Ndinobva mac
Nhasi kutanga dambudziko reMwedzi weMoyo 2019
Isu takatofambira mberi mazuva mashoma apfuura uye nhasi Apple inotanga nedambudziko iri mune vashandisi vane Apple Watch uye vanoda kuitora vanofanirwa kufamba. Idambudziko rakareruka rakagadzirirwa isu kuti tifambe zvishoma mwedzi uno uye inove sezvatakazivisa kare zadzisa iyo Exercise mhete kwemazuva manomwe akateedzana kubva nhasi Kukadzi 8 kusvika zuva rinotevera 14.
Mubairo uyu unogara uri mukuvandudza muhutano hwedu, menduru ine mucherechedzo weiyo Mwedzi weMoyo uye zvitambi zvinoenderana kuti ugone kugovana nevatinosangana navo kubva kuApple Meseji app pachayo.
Dambudziko rinobatsira, pamusoro pazvose, kugara wakasimba
Uye ndizvo chaizvo Chinangwa chematambudziko aya chakagadzirwa neApple kune vashandisi veApple Watch ndechekuti isu tifambe zvishoma kusimudzira hutano hwedu mune inowedzera kugara uye kungogara pasi. Ichokwadi kuti vashandisi vazhinji vari kuchinja tsika dzekudya uye vari kutanga kukwana, saka chinetso cherudzi urwu chinoita kuti zvive nyore kwatiri kuti tibatwe nekuita mitambo zuva nezuva kuchengetedza hutano hwedu pakakwirira.
Vhiki umo vazhinji vachatanga kutamba mitambo kuti vawane menduru yekufananidzira uye zvinogona kunge zvichizovanamatira ivo pachavo ita hafu yeawa yekudzidzira pazuva, hazvina basa kuti iri kufamba, kumhanya, kuchovha kana chero chii, chakakosha kufamba. Kune rimwe divi, vashandi veApple vane dambudziko rakakura uye mubairo wakakura nechinetso chemwedzi nemwedzi umo avo vanozviwana vachakunda tambo yakasarudzika yeako Apple Watch. Zvingave zvakanaka kana Apple ikatanga dambudziko nemhando iyi yemubairo imwe nguva kune vashandisi vayo, haufunge?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nhasi kutanga dambudziko reMwedzi weMoyo 2019
Apple inoshandira mukadzi anozvara Christine Curry kuti atarise pahutano hwevakadzi
Iyo DAZN app inowedzera sarudzo yekutarisa zviitiko zvina panguva imwechete paApple TV